Mgbanwe na Cisco si Data Center
200-150 DCICN: Na-ebute Cisco Data Center IZIRỊTA
200-155 DCICT: Ntinye Cisco Data Center Teknụzụ
300-175 DCUCI: Imejuputa Cisco Data Center Unified Computing
300-165 DCII: Ịmepụta Cisco Data Center Ihe Akụrụngwa
300-160 DCID: Ịmepụta Cisco Data Center Ihe Akụrụngwa
300-180 DCIT: Nchọpụta nsogbu Cisco Data Center Akụrụngwa
Cisco si Data Center: Ndabere na ntanetị anya na-emepe emepe. A na-adabere na ndị ọkachamara na-arụ ọrụ na nchịkọta data na inwe ihe ziri ezi ma na-amụta na inye ikike data ahụ na-elekwasị anya iji IT rụọ ọrụ dịka ntọala ntọala (ITaaS).
N'afọ a, Cisco na-atụgharị ụfọdụ ezigbo mmezi na otu ị ga - esi mezuo na ị ga - arụ ọrụ na nsonye data. Goliath na netwọk na-emepụta ntụgharị ọganihu dị mma maka ma nyocha Cisco Certified Network Associate (CCNA) nke Center Data na Cisco Certified Network Professional (CCNP) nyochaa Data Center dị iche iche na-elekwasị anya na afọ a, ọ bụkwa ohere zuru oke iji nweta oge gbasara ihe dị ka nke ugbu a mere, na na mgbakwunye ekwesịghị ihe a ga-ekwu banyere ihe ga-eme.
Na ohere na ị naghị ege ntị nke ọma, CCNA Data Center na-enyocha na ọzụzụ na saịtị Cisco ka gbanwere iji mepụta 6.0. April 11, 2017 bụ ụbọchị kachasị ọhụrụ iji nyochaa 640-911 DCICN v1.0 na 640-916 DCICT v1.0.
Ntughari aha na acronyms gara n'ihu dị ka ọ dị na mbu, ma nọmba nke ọ bụla nyochaa emetụla.
640-911 DCICN nyocha nke 2 kagburu ya00-150 DCICN nyocha ma nwekwuo akụkụ ọmụmụ ihe nyocha nke mejupụtara dịka ihe dị mkpa maka ma dozie ya na CCNP Data Center, CCIE Data Center na ndị ọzọ Cisco certification.
Na nyocha ọhụrụ a, Cisco kpochapụrụ ihe ụfọdụ components, ethernet ala-larịị bara uru, na Cisco IOS ịgbanwe isi ihe, n'etiti ndị ọzọ. E nwere mgbasawanye gbasiri ike na echiche nhazi netwọk data, ohere dị elu na-agbanwe mgbanwe, echiche data na-echekwa data, na fiber Channel n'elu Ethernet (FCoE).
200-155 DCICT: Inye Cisco Data Center Teknụzụ
A nyochare nyocha 640-916 DCICT site na nyocha 200-155 DCICT ma nweta nhazi nyocha nke nyocha nke mejupụtara dị ka ihe dị mkpa maka na dozie na CCNP Data Center, CCIE Data Center na ndị Cisco certification.
Na nyocha ọhụrụ a, Cisco kwụsịrị Data Center Fundamentals themes including SAN, nhazi usoro netwọk, na nchịkwa netwọk, n'etiti ndị ọzọ. E nwere mgbasawanye gbasiri ike na njedebe nke njirimara na netwọk, nhazi igwe ojii, nhazi kọmputa na nhazi nke usoro nlebara anya data, na Ngwa Centric Infrastructure (ACI).
Ihe CCNP Data Center nyocha na ọzụzụ na saịtị Cisco gbanwere na Jenụwarị 17, 2017. Site na July 3, 2017, ịnwere ike ịnwale nyocha v5 ma ọ bụ nyocha v6 ọhụrụ ahụ, na-adabere n'ihe mgbaru ọsọ gị.
Aha akwukwo, acronyms, na ule ngbanwo gbanwee ka ha di nma karia ihe ndi ozo na oru ndi choro n'oru ndi ndi okachamara nke IT tinyere.
Ihe nyocha 642-999 DCUCI ga-agbanwe ya site na 300-175 DCUCI nyocha ma nwekwuo ohere ọmụmụ nyocha nke jupụtara dị ka ihe dị mkpa maka ma gbanwee Cisco CCNP Data Center, CCIE Data Center, na akwụkwọ Cisco ọzọ.
N'elu ule ọhụrụ a, Cisco chụpụrụ ihe ụfọdụ maka B-Usoro na C-Series UCS Servers na UCS Server Virtualization Features, na-agbakwụnye ya na ule nyocha nke ukwuu nke "Kwepụta Njikọ nke Management Centralized." E nwere ụbawanye nkwenye na robotization, nchekwa nche data, na netwọk na-echekwa data, gụnyere FCoE.
Ihe nyocha 642-997 DCUFI a ga-ehichapụ ya nyocha nke 300-165 DCII ma nwee klas nke nyocha nyocha nke mejupụtara dị ka ihe dị mkpa maka ma dozie Cisco CCNP Data Center, CCIE Data Center, na akwụkwọ Cisco ọzọ.
N'elu ule ọhụrụ a, Cisco chụpụrụ ihe ụfọdụ maka Cisco Nexus switches na Cisco NX-OS Software ma belata uche na netwọk nke netwọk. E nwere mgbasawanye gbasaa n'ọganihu ọhụrụ, VXLAM, nhazi, na ọtụtụ isiokwu gbasara nchekwa nchedo data.
300-170 DCVAI: Na-eme ka Cisco Data Center Virtualization and Automation
Ihe nyocha nke 300-170 DCVAI bụ ihe ọhụrụ ma nyochaa aptitudes ndị bụ ihe iji kọwaa arụmọrụ anya data na ịmepụta ihe na-eme ka a ghara ịchọta ihe gbasara ihe omuma na ihe omuma. Nhazi ọkwa ule ohuru ohuru juputara dika ihe di mkpa maka ma gbanwee Cisco CCNP Data Center, CCIE Data Center, na akwụkwọ Cisco ọzọ.
Na nyocha a, e nwere nlezianya maka mmegbu maka nhazi kọmputa, ntọala nke ngwa Centric, Ngwa Centric kpuchie netwọk, na Ụlọ Ọrụ Centric Infrastructure na nlekọta.
The 642-998 DCUCD na 642-996 DCUFD a ga-eji nyocha elele anya 300-160 DCID ule nke nyochaa akụkụ ule nyocha nke mejupụtara dị ka ihe dị mkpa maka ma gbanwee Cisco CCNP Data Center, CCIE Data Center, na ndị ọzọ na Cisco certifications.
Na nyocha ọhụrụ a, Cisco kpochapụrụ atụmatụ nkà ihe ọmụma, usoro nlezianya data, ịchọta isiokwu, na ndepụta nchekwa. Ebumnuche nke data jikọtara ọnụ na-edekọ ọnụ ma chịkọta ọnụ atụmatụ atụmatụ atụmatụ abanye na otu nyocha, na-atụle ihe aapụ dị iche iche a na-atụ anya ya site na ọkachamara IT.
The 642-998 DCUCD nyocha na 642-996 DCUFD a ga-agbanye nyocha site na 300-180 DCIT nyocha ma nwekwuo ohere ọmụmụ nyocha nke jupụtara dị ka ihe dị mkpa maka ma dozie ya na Cisco CCNP Data Center, CCIE Data Center, na akwụkwọ Cisco ndị ọzọ.
N'elu ule ọhụrụ a, Cisco chụpụrụ ihe ụfọdụ maka B-Series na C-Series UCS Servers, na-eme ka ihe na-adịgide adịgide na-ezukọta n'otu mpaghara, "Ịchọpụta Data Platform Compute Platforms." E nwere mgbasawanye gbasiri ike na nyocha usoro nhazi usoro, emegharị ihe na-agbanwe agbanwe, Ngwaọrụ Centric Ngwa (ACI) na data lekwasịrị anya LAN na SAN nche, na nhazi usoro.
Iji duzie gị ka ị na-aga n'ihu na mgbanwe ndị na-agbanwe, Cisco wuru CCNP Data Center Exam Migration Tool that you can use to make sense of what tests you have to take next.
Nyocha ndị a na-etolite iji nye gị nkuzi kachasị ọhụrụ iji hazie ma rụọ ọrụ ntinye anya na nlezianya nke data, gụnyere netwọk; netwọk, netwọk, na ikike ikike; echekwa echiche na omenala; njikọ nhazi ọnụ na usoro a na-eduzi usoro, niile na-aga n'ihu.
Ihe 5 ị ghaghị ịma gbasara Cisco CCNA Asambodo